dr.fone: कसरी iOS र एन्ड्रोइड बीच WhatsApp कुराकानी स्थानान्तरण ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | Android, सफ्टवेयर
यो सम्भव छ कि कुनै खास समयमा एक एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट अर्कोमा आईओएस वा विपरितको साथ स्विच गर्नुहोस्। डाटा ट्रान्सफर प्रक्रिया सँधै सीधा हुँदैन। थप रूपमा, त्यहाँ एक पक्ष छ जसले पक्कै धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई चिन्तित गर्दछ, जुन व्हाट्सएपमा उनीहरूको च्याट हुन्। तपाईं अनुप्रयोगको सबै डाटा एक फोनबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी सहज छैन। यस सन्दर्भमा, dr.fone एक राम्रो मद्दत हो।
यस उपकरणका लागि धन्यबाद, हामीसँग यसको सम्भावना हुनेछ एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट वाट्सएपलाई आईओएसमा वा यसको विपरितमा ट्रान्सफर गर्नुहोस्। त्यसोभए हामीसँग सबै डेटा छ जुन हामी लोकप्रिय सन्देश अनुप्रयोगमा प्रयोग गर्दछौं। यो हामी dr.fone मा उपलब्ध धेरै सुविधाहरू मध्ये एक हो। सम्भवत धेरैको लागि सब भन्दा चाखलाग्दो।
1 Dr.fone के हो?
2 कसरी यो सुविधा dr.fone मा काम गर्दछ
3 ब्याकअप र व्हाट्सएप च्याट पुनर्स्थापना
4 Dr.fone डाउनलोड गर्न को लागी
Dr.fone के हो?
Wondershare - dr.fone यो एक हो उपकरण जसले हामीलाई प्रकार्यहरू दिन्छ हाम्रो स्मार्टफोनको लागि, दुबै आईओएस र एन्ड्रोइड। यसको लागि धन्यबाद, हामीसँग फोनमा केहि कार्यहरू गर्ने सम्भावना छ। त्यहाँ फोन समस्याहरू मर्मत गर्ने सम्भावना छ, तिनीहरूबाट डाटा पुनर्स्थापना गर्न, गोपनीयता वा डेटा पुनःप्राप्ति सुरक्षित गर्न उपकरणबाट डाटा मेटाउनुहोस्। यद्यपि dr.fone मा स्टार समारोह सामाजिक अनुप्रयोग बहाल छ।
यो यस प्रकार्यको बारेमा हो जुन हामी यस अवस्थामा कुरा गरिरहेका छौं। यसको लागि धन्यबाद हामीसँग छ यी कुराकानीहरू व्हाट्सएपमा निर्यात वा स्थानान्तरण गर्नुहोस् एक स्मार्टफोनबाट अर्कोमा जुन प्रयोगकर्ताहरूका लागि सजिलो छ। त्यसैले प्रक्रिया सुरक्षित छ, सरल र सबै समय मा धेरै छिटो। कुनै श doubt्का बिना, एउटा उपकरण जुन धेरैले पर्खिरहेका थिए र dr.fone मार्फत यो सम्भव छ।
कसरी यो सुविधा dr.fone मा काम गर्दछ
यस सुविधाका लागि धन्यबाद, यो कुराकानीहरू एन्ड्रोइड र आईओएस स्मार्टफोन बीचमा ट्रान्सफर गर्न सम्भव छदुबै दिशामा। प्रयोग प्रक्रियामा धेरै जटिलताहरू छैनन्, किनकि हामी यसलाई सिधा गर्न सक्षम हुनेछौं। हामीले भर्खर यस उपकरणमा dr.fone डाउनलोड गर्नुपर्दछ, यस अवस्थामा कम्प्युटरमा, र यसलाई सुरुवात गर्नुहोस्। जब हामी यसलाई खोल्छौं, हामीसँग एउटा प्रकार्य उपलब्ध छ जुन सामाजिक अनुप्रयोगहरू रिस्टोर गर्दछ।
यस प्रकार्यलाई धन्यवाद सम्भव छ एन्ड्रोइड र आईफोनको बीचमा व्हाट्सएप पास गर्नुहोस् वा एक साधारण देखि अर्को स्मार्टफोन गर्न। तसर्थ, जब dr.fone चलिरहेको छ, यो पहिले चयन गर्न प्रकार्य हो। त्यसो भए कार्यक्रमले प्रयोगकर्तालाई ती छनौटहरू हस्तान्तरण गर्न चाहेको अनुप्रयोग छनौट गर्न अनुरोध गर्दछ जुन यस अवस्थामा व्हाट्सएप हो। त्यसकारण तपाईंले यस विशेष अवस्थामा व्हाट्सएपमा क्लिक गर्नुपर्नेछ।
अर्को तपाईले ट्रान्सफर व्हाट्सएप सन्देश विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए, प्रश्नमा रहेका दुई स्मार्टफोनहरू कम्प्युटरमा जडान हुनुपर्दछ। या त दुई Android स्मार्टफोन, दुई आईफोन वा प्रत्येकको एक मोडल। जब उनीहरू पहिले नै कम्प्युटरमा जडान भएका छन्, तपाईंले स्थानान्तरण बटनमा हिर्काउनु पर्छ, ताकि प्रक्रिया सुरू हुन्छ। अर्को, dr.fone ले सामान्यतया चेतावनी सन्देशको एक जोडी प्रदर्शन गर्दछ, जुन हामीले कुनै पनि केसमा स्वीकार्नुपर्दछ। त्यसो भए, यी व्हाट्सएप च्याटहरू एक उपकरणबाट अर्को उपकरणमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरू हुनेछ।
जब यो समाप्त हुन्छ, तपाईंले नयाँ स्मार्टफोनमा व्हाट्सएप खोल्नु पर्छ, जुन डाटा डाटा ट्रान्सफर गरिएको छ। त्यसो भए, अनुप्रयोग भित्रै तपाईंले भर्खर यी च्याटहरू पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए हामीसँग सबै च्याटहरू छन् जुन अनुप्रयोगमा थिए फेरि dr.fone धन्यवाद। प्रक्रिया जटिल छैन र आधिकारिक मिनेट को एक मामला मा पूरा भयो।
ब्याकअप र व्हाट्सएप च्याट पुनर्स्थापना
जे भए पनि स्थानान्तरण मात्र चीज होईन कि dr.fone तपाईं के गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। किनकि यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई r को क्षमता प्रदान गर्दछब्याक अप वा व्हाट्सएप च्याट पुनर्स्थापना साधारण तरिकामा। निस्सन्देह यो एक धेरै पूर्ण विकल्प बनाउँछ। यी सबै समान कार्यमा सम्भव छ जुन हामीले अघिल्लो सेक्सनमा प्रयोग गर्‍यौं।
यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको कुराकानीहरूको जगेडा गर्न अनुमति दिन्छ ताकि कुनै पनि समयमा कुनै डाटा हराउने छैन। यो गर्न सजिलो छ। रिस्टोर सामाजिक अनुप्रयोगको यस विकल्पमा जुन हामी पहिले प्रविष्टि गरेका छौं, हामीसँग ब्याकअप पनि छ, जसले गर्दा अनुप्रयोग च्याटमा ब्याकअप गर्न अनुमति दिन्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले फोनमा गर्नुपर्दा कम्प्युटरमा जडान भएको बेलामा यसलाई गर्नुपर्दछ।
अर्कोतर्फ, हामी dr.fone को उपयोग गरेर च्याटहरू बहाल गर्न सम्भावना छ। एक पटक ती मध्ये एक ब्याकअप भए पछि, फोनमा सन्देश अनुप्रयोग खोल्दा, तपाईंसँग पहिले नै यो विकल्प छ उपकरणमा उपकरणमा WhatsApp सन्देशहरू पुनर्स्थापित गर्न। त्यसोभए तपाईले पुनःबहाली गर्न चाहानु भएको फाइल छनौट गर्नुपर्नेछ, त्यहाँ त्यहाँ धेरै ब्याकअप प्रतिलिपिहरू बनाइएको अवस्थामा। थप रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुप्रयोगमा कुन च्याटहरू पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ भनेर चयन गर्न संभावना दिइन्छ। त्यसैले प्रयोगकर्तासँग कुनै अर्थ बिना समस्यामा अन्तिम शब्द छ।
Dr.fone डाउनलोड गर्न को लागी
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, dr.fone एक धेरै उपयोगी उपकरण संसारभरि लाखौं प्रयोगकर्ताहरूका लागि। तसर्थ, यदि तपाईं एन्ड्रोइडबाट आईओएस वा यसको विपरित जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो एक अनुप्रयोग हो जुन यस प्रक्रियालाई सँधै सजिलो बनाउन सक्दछ। थप रूपमा, यसले हामीलाई धेरै कार्यहरू दिन्छ, जुन हामीले उल्लेख गरेका छौं। यो एक प्रोग्राम हो जुन हामीले कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नुपर्दछ, विन्डोज र म्याक संग उपयुक्त।
यदि हामी dr.fone प्रयोग गर्न चाहान्छौं, हामी कम्प्युटरमा नि: शुल्क अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्दछौं, यस लिङ्कबाट। यद्यपि यो सामाजिक रिस्टोर फंक्शन जुन हामी कुरा गर्दैछौं, यो एक सशुल्क अनुप्रयोग हो। हामीसँग भुक्तान योजनाहरू उपलब्ध छन्, ताकि तपाईले प्रयोग गर्न चाहानु भएको प्रयोगमा निर्भर भई सबैभन्दा ठूलो चासोको छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं वेबमा उपलब्ध सबै योजनाहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
कुनै पनि केसमा, यसको लागि प्रयोगलाई ध्यानमा राख्नु राम्रो हो, यस अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु अघि। त्यसोभए तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि यो वास्तवमा प्रयोगकर्ताको उपयोग को हो। यसैले, यो योजना छनौट गर्न सजिलो हुनेछ जुन तपाईले खोजिरहनु भएको सबै भन्दा राम्रो मिल्छ। जे होस् तपाईसँग स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने सम्भावना छ, निश्चय पनि यस सन्दर्भमा ठूलो सहयोगी हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » Android » dr.fone: iOS र Android मा WhatsApp हस्तान्तरण र पुनर्स्थापना गर्न उपकरण